Abakhiqizi nabahlinzeki be-XPON ONU | I-China XPON ONU Factory
I-34234GDE iyithuluzi lokuphela kochungechunge lwe-XPON oluhambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi lihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obuzinzile futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-34234GDE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN kanye neMT7612EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n kanye ...
34123GDE 1GE + 3FE + Izimbiza + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
I-34123GDE iyisetshenziswa esibulalayo sechungechunge lwe-XPON esihambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi sihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obuzinzile futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-34123GDE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile. Futhi ...
32123GDE 1GE + 1FE + Izimbiza + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
I-32123GDE iyithuluzi lokuphela kochungechunge lwe-XPON oluhambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi lihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obuzinzile futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-32123GDE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile.
I-3434GE2 iyisetshenziswa esibulalayo sochungechunge lwe-XPON esihambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi sihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol, esekwe kokuvuthiwe nokuzinzile, nezindleko eziphezulu- ubuchwepheshe obusebenzayo be-GPON obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi bunokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-3434GE2 isekela i-WIFI4 (IEEE802.11b / g / n) ne-WIFI5 (IEEE802.11ac). Ibuye inikeze abaphathi be-WEB ...
3413GE 1GE + 3FE + Izimbiza + 2.4G WIFI XPON ONU
I-3413GE iyisetshenziswa esibulalayo sochungechunge lwe-XPON esihambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi sihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-3413GE isebenzisa uhlelo lwe-MTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lwe-WIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n standard.Ibuye futhi ...
I-3412GDE 1GE + 3FE + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
I-3412GDE iyithuluzi lokuphela kochungechunge lwe-XPON oluhambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi lihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obuzinzile futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-3412GDE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile. Futhi p ...
3213GE 1GE + 1FE + Izimbiza + 2.4G WIFI XPON ONU
I-3213GE iyisetshenziswa esibulalayo sechungechunge lwe-XPON esihambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi sihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol. Kususelwa kubuchwepheshe be-GPON obuvuthiwe futhi obuzinzile futhi obubiza kakhulu obamukela ukusebenza okuphezulu kwe-XPON ZTE chipset futhi inokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-3213GE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile. Futhi pro ...
I-341GE 1GE + 3FE + 2.4G WIFI XPON ONU
I-341GE ingumshini wokugcina ochungechungeni lwe-GPON oluthobela ngokuphelele i-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi ihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol, esekwe kumthetho ovuthiwe, ozinzile futhi obiza kakhulu. Ubuchwepheshe be-GPON obusebenzisa ukusebenza kwe-GPON ZTE chipset ephezulu futhi bunokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-341GE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile. Futhi provi ...
I-321GE 1GE + 1FE + 2.4G WIFI XPON ONU
I-321GE ingumshini wokugcina ochungechungeni lwe-XPON oluhambisana ngokuphelele ne-ITU-G.984.1 / 2 / 3/4 standard futhi ihlangabezana nokonga amandla kwe-G.987.3 protocol, esekwe kumthetho ovuthiwe, ozinzile futhi obiza kakhulu. Ubuchwepheshe be-GPON obusebenzisa ukusebenza okuphezulu kwe-GPON ZTE chipset futhi kunokwethenjelwa okuphezulu, ukuphathwa okulula, ukumiswa okuguqukayo, ukuqina, isiqinisekiso senkonzo esezingeni eliphakeme (Qos). I-321GE isebenzisa uhlelo lweMTK MT7603EN lohlelo lokusebenza lweWIFI olusekela i-IEEE802.11b / g / n ejwayelekile. Kubuye futhi ...